IiParasites kwiTetra | Ngeentlanzi
Las izifo ezimbi kakhulu oko kungasokola Iintlanzi ze-tetra zizidudu. Ngokukodwa i-parasite eyaziwa ngokuba yi-Pleistophora hyphessobryconis. Sisifo esichaphazela amalungu okugaya iintlanzi. Esi sifunxi-gazi kunqabile ukuba sichaphazele ezinye iintlobo ezihlala emanzini. Zizidleleli ezithile ezichaphazela ikakhulu itetra.
Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba esi sifo, nangona sinxulumene ngqo netetra, kukho ezinye iintlobo ze IiCharacids kunye neCyprinids eziba nezifo ezifanayo nangona i-parasite enoxanduva yohlukile kwimeko nganye.
Ukuba sithetha ngemeko ethambileyo, asinakuze siphawule nantoni na engaqhelekanga kwintlanzi. Sithetha ngosulelo olungapheliyo xa unobangela wombala, ngakumbi kwimivumbo ebomvu yeentsana. Iimpawu kukudada ngokungalunganga, ukugoba emqolo, ukubhitya kunye nokubola kwebhakteriya kwimiphetho njengesiphumo sokuphulukana nokuzikhusela.
Njengoko sisifo esiqala kwinkqubo yokwetyisa, oku kubangela ukwehla ngokuthe ngcembe kwezixhobo zamandla kunye nokuzikhusela ngenxa yoko kukuvela kweentsholongwane ezininzi kunye nosulelo. Kuyacetyiswa ukuba iintlanzi ezisulelekileyo zisuswe ziye kwenye i-aquarium. Ukusukela ukuba ii-spores zala ma-parasites zingaphila ixesha elithile kwi-aquarium apho bekukho iintlanzi ezosulelekileyo.
Ukunyanga i-Pleistophora parasite akusebenzi ngokupheleleyo. Inokunyangwa nge iikhompawundi ezaziwa njenge furazolidone. Nangona kungekho zireferensi ezininzi ezisebenzayo ngokuchasene nesi sifunxi-gazi. Kodwa kuyasebenza ekuphepheni iziphumo ebezingalindelekanga.
Eyona ndlela isebenzayo kukususwa kwe-tetra eyosulelekileyo. Inkqubo ye- Ukusetyenziswa kwezibane ze-germicidal kuyacetyiswa kwinqanaba lokudada elingenasiphene kodwa hayi usulelo lwangaphakathi. Uninzi lwabo banamazinga aphezulu okusweleka. Lumka kakhulu xa besifa kwaye ungahlali kwi-aquarium kuba ezinye iintlanzi zinokosulelwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » IiParasites kwiTetra